Wasiirka Arrimaha Dibadda Norway oo Muqdisho kula kulmay Madax Norwagian ah oo xilal ka haya Somalia. – Hornafrik Media Network
Wasiirka Arrimaha Dibadda Norway oo Muqdisho kula kulmay Madax Norwagian ah oo xilal ka haya Somalia.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Wasiirka Arrimaha Arrimaha Dibadda Norwey Børge Brende iyo wafdi uu horkacayo oo maanta booqasho ku yimid magaalada Muqdisho.
Kulanka ayaa looga hadlay xiriirka labada dal iyo taageerada Norway ee dib u dhiska Soomaaliya, waxaa kulanka goob joog ka ahaa Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo heysta dhalashada Norway, marna Madax ka soo noqday Hey’adda Qaxootiga dalkaas ee NRC ayaa soo dhoweeyay sida ay dawladda Norway xilligan ugu heelan tahay inay gacan ka gaysato dadaallada lagu xasilinayo dalka iyo sidoo kale dhismaha dawladnimada Soomaaliya oo maraya meel aad muhiim u ah.
Mr Kheyre ayaa sheegay in dowladdiisa ay guul wax ku ool ah ka gaartay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay arrimaha mudnaanta sare u leh.
“Booqashada uu noogu yimid Wasiirka Arrimaha Dibadda Norwey, waxay cadeynaysaa horumarka ballaaran ee la sameeyey afartii bilood ee la soo dhaafay oo sii jiitay indhaha caalamka, waxaan isla soo qaadnay arrimo muhiim ah oo wax tar u leh dalkeena, iyaguna waxay qireen in Soomaaliya ay u heelan tahay sidii ay uga faaiideysan lahayd taageerada uu caalamku siiyo”ayuu yiri R.W Khayre.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Norwey Børge Brende ayaa dhankiisa ka mahadceliyey sidii wanaagsaneyn ee loogu soo dhoweeyay Soomaaliya iyo sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka labada dal.
Waxaa uu sheegay in Soomaaliya ay sameysay horumar baxaad leh 4-tii bilood ee la soo dhaafay, isla markaana loo baahan yahay in la sii adkeeyo.
Sidoo kale waxaa uu tilmaamay in dalkiisu sii wadi doono taageerada dhinacyada kala duwan ee uu siiyo Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha amniga dib u heshiisiinta iyo dhismaha hay’adaha dowladda.
Norway ayaa ka mid ah dalalka taageerada dhaqaale ku bixiya Soomaaliya, hase ahaatee dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaa lagu eedeynayay inay taageersaneyd qorshaha Kenya ku dooneysay inay shidaal kaga qado dhul badeedka dhaca biyaha Soomaaliya oo la sheego inuu shidaal leeyahay.
Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo ku dhowaaday deegaan uu ku sugan yahay Abuu Mansuur
Muqdisho oo Xalay lagu dilay Sarkaal Milatari ah.